» मेघा र मुस्कान पुग्लान त उत्कृष्ट ६ मा ?
मेघा र मुस्कान पुग्लान त उत्कृष्ट ६ मा ?
२१ फाल्गुन २०७६, बुधबार १६:४२
मकवानपुर, २१ फागुन । चर्चित सिंगिङ रियालिटी शो नेपाल आईडलको उत्कृष्ट ७ मा पर्न सफल मेघा श्रेष्ठ र मुस्कान रानाभाट प्रायजसो बटम ३ मा पर्ने गरेका छिन् । उनीहरु दुबैजना गत हप्ता पनि बटम ३ मा परेका थिए । सिजन ३ को एकमात्र गोल्डेन माईक विजेता मेघाले गत हप्ता सर्वाधिक भोट प्राप्त गर्दै आएकी रचना रिमाल र मुस्कान रानाभाटसँगै बटम २ को सामना गरेकी थिईन् । तर सर्वाधिक भोट प्राप्त गर्दै आएता पनि रचना सेभ हुन सकिनन् । यसर्थ बटम २ वा बटम ३ मा परेकै भरमा मेघा वा मुस्कान अघि नबढ्लान् भन्ने अवस्था छैन तर प्रायजसो बटम ३ मा पर्ने गरेका कारण मेघा र मुस्कानलाई यो हप्ता खतरा भएको दर्शकहरुको कमेन्ट छ । गाला राउण्डको दोस्रो हप्तामा स्वस्तिका ढकाल र मिग्मा लामा बटम २ मा परेका थिए । उनीहरुमध्ये हेटौँडाकी स्वस्तिका ढकाल शोबाट बाहिरिएकी थिईन् । त्यस्तै तेस्रो हप्ता कमल शोब र मेघा श्रेष्ठ बटम २ मा परेका थिए । त्यस हप्ता कमल शोबको नेपाल आईडल यात्रा समाप्त भयो । त्यस्तै गाला राउण्डको चौथो हप्ता पोखराकी ममता गुरुङ र मिग्मा लामाले बटम २ को सामना गरेका थिए । अचम्मको कुरा सोही हप्ता अपलिफ्टीङ पर्फोमेन्स अफ द डे जितेकी मिग्मा लामा नै शोबाट बाहिरिएकी थिईन् । हेरौँ भिडियो–
त्यस्तै पाँचौँ हप्ता ममता गुरुङ, मुस्कान रानाभाट र मेघा श्रेष्ठले बटम ३ को सामना गर्नुपर्यो । उक्त राउण्डमा पोखराकी ममता गुरुङ शो बाट बाहिरिईन् । यसरी मेघाले गाला राउण्डको तेस्रो हप्ता, पाँचौँ हप्ता र छैटौँ हप्ता गरी ३ पटक बटम ३ को सामना गरेकी छिन् । त्यस्तै मुस्कान रानाभाटले गाला राउण्डको पाँचौँ र छैटौँ हप्तामा गरी २ पटक बटम ३ को सामना गरेकी छिन् । यसरी हेर्दा मेघा र मुस्कानलाई यो हप्ता खतरा भएको दर्शकहरु बताउँछन् । हुन त यो हप्ताको शुटिङ सोमबार तिर नै भईसकेको अनुमान छ यसर्थ को बाहिरियो भन्ने कुराबाट दर्शकहरु अनभिज्ञ भएता पनि निर्णायक र सहभागीहरुलाई भने यो कुरा थाहा भइसकेको छ । तपाईको विचारमा यी दुई प्रतियोगी वा अन्य प्रतियोगीहरुमध्ये यो बिहीबार उत्कृष्ट ६ मा कोको पुग्नेछन् ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोला ।
मेघाले गाला राउण्डको छैटौँ हप्ताको समाप्तिसँगै जितेको अवार्डको संख्या ६ वटा पुगेको छ । मेघा श्रेष्ठ नेपाल आईडल सिजन ३ को उपाधी दाबेदारमध्येकी एक प्रतियोगी हुन् । मेघाले गाला राउण्डको पहिलो हप्ता बर्जर ग्लामर मोमेन्ट अफ द विक अवार्ड जितेकी थिईन् । त्यस्तै गाला राउण्डको दोस्रो हप्ता मिग्मा लामासँगको जोडी प्रस्तुतिमा र तेस्रो हप्ता नेशन पुन मगरसँगको जोडी प्रस्तुतिका क्रममा उनले कोकाकोला अपलिफ्टीङ पर्फोमेन्स अफ द डे अवार्ड जितेकी थिईन् । तेस्रो हप्ता नै उनले रेस्पेक्ट पर्फोमेन्स अफ द विक अवार्ड पनि जितेकी थिईन् । उनले चौथो हप्ता केविन ग्लान तामाङ, सज्जा चौलागाई र प्रविण बेड्वालसँगै संयुक्त रुपमा कोकाकोला अपलिफ्टीङ पर्फोमेन्स अफ द डे अवार्ड जितेकी थिईन् । त्यस्तै गाला राउण्डको छैटौँ हप्ता उत्कृष्ट ७ को सोलो प्रस्तुतिका क्रममा बर्जर ग्लामर मोमेन्ट अफ द विक अवार्ड जितेकी थिईन् । मेघाको भोटिङ कोड एनआई ०५ हो । उनलाई भोट गर्नका लागि नेपालबाट उनको भोटिङ कोड लेखेर एनटिसी, स्मार्ट सेल र एनसेलबाट ३७००० मा म्यासेज गर्न सकिन्छ । त्यस्तै १६६६७७०५ डायल गरेर उनलाई भोट गर्न सकिन्छ भने भारतबाट भोडाफोन मापःर्mत ५३०१० मा, कतारबाट ओरेडुमार्फत ९२३०० मा र मलेसियाबाट अल टेलिकोसमार्फत ३३३१० मा म्यासेज गर्न सकिन्छ । उनलाई रेस्पेक्ट एण्ड राईज एपबाट तपाईले चाहानुभएको जति रकमको प्याकेज भोट एकैपटक गर्न सक्नुहुन्छ ।
मुस्कान रानाभाट नेपाल आईडल सिजन ३ को उपाधी दाबेदारमध्येकी एक प्रतियोगी हुन् । उनले नेपाल आईडलमा अहिलेसम्म एउटा अवार्ड जित्न सफल भएकी छिन् । उनले गाला राउण्डको दोस्रो हप्तामा ‘बर्जर ग्लामर मोमेन्ट अफ द विक’ अवार्ड जितेकी थिईन् । उनी पोखरा निवासी हुन् । नेपाल आईडल सिजन ३ मा फरक प्रस्तुतिहरु दिएर चर्चामा आएकी २२ वर्षिया मुस्कानले संगीत विषयमै स्नातक अध्ययन गरिरहेकी छिन् । ९ वर्षको उमेरमा नै ‘बेबी मुस्कान’ नामक एल्बम निकालेकी मुस्कान सानै उमेरदेखि सँगीतको क्षेत्रमा लागेकी हुन् । सानोमा गाउन नजाने पनि गाउँछु भन्दै अग्रसरता देखाएको उनी सम्झन्छिन् । सानोमा साईबाबाको भजन गाउने गरेकी मुस्कानले साँगितिक परिवारमै हुर्कने मौका पाएकी थिईन् । बुवा साँगितिक बाजाहरु ब्जाउने र आमा गाउने कलामा निपुण भएका कारण मुस्कानले पनि संगीतमा रुचि राख्दै अघि बढेकी हुन् । संगीतकार बन्ने बुवा र आमाको सपनालाई अहिले मुस्कानले अघि बढाएकी छिन् । आफु सहभागी भएको कुनै पनि साँगितिक कार्यक्रममा प्रथम हुने गरेकी मुस्कानलाई उनका परिवारले पनि संगीतमै करियर बनाउन मदत गरेका छन् ।
मुस्कानको भोटिङ कोड एनआई ०७ हो । उनलाई भोट गर्नका लागि नेपालबाट उनको भोटिङ कोड लेखेर एनटिसी, स्मार्ट सेल र एनसेलबाट ३७००० मा म्यासेज गर्न सकिन्छ । त्यस्तै १६६६७७०७ डायल गरेर उनलाई भोट गर्न सकिन्छ भने भारतबाट भोडाफोन मार्फत ५३०१० मा, कतारबाट ओरेडुमार्फत ९२३०० मा र मलेसियाबाट अल टेलिकोसमार्फत ३३३१० मा म्यासेज गर्न सकिन्छ । उनलाई रेस्पेक्ट एण्ड राईज एपबाट तपाईले चाहानुभएको जति रकमको प्याकेज भोट एकैपटक गर्न सक्नुहुन्छ । आदरणिय दर्शकविन्द तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो ? तपाईको विचारमा नेपाल आईडन सिजन ३ को विजेता को बन्नेछ ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । यस्तै भिडियोहरुका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राईब गर्नुहोस् ।